Cashirkii 1aad: Maamulka Ganacsiga Caalamiga, Waa Maxay Maamulka Ganacsiga Caalamiga? |Tukesomalism.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan, September 25, 2015
Cabdijabaar Sh. Axmed — June 7, 2016
Koorsadaan waa koorso gaarayso illaa iyo 25 cashir. Koorsadaan waxaan ku bixini doonaa afka Soomaaliga si bulsha weynta Soomaaliyeed wax badan ugu fahmaan waxa loo yaqaano Maamulka Ganacsiga Caalamiga (International Business Management). Dabcan jaamacadaha ku yaallo gudaha Soomaaliya sidda: Muqdisho, Hargeysa, Garowe, kismaanyo, Baydhabo, Waqooyi bari, Soomaali Galbeed, Jabuuti iyo meelo kale oo ka mid ah gayiga Soomaaliyeed,waxaad ku aragtaa Maamulka iyo Maareenta (Business Adminstration) oo lagu dhigaayo jaamacahada, balse hadalkeyga nuxurkiisa ayaa ah dadka inta badan waxay yaqanaan Maamulka iyo Maareenta ee ma yaqanaan waxa loo yaqaano Maamulka Ganacsiga Caalamiga (International Business Management)
Koorsadaan waxay ka koobantahay qeybo kale duwan qeyb walbana waxay sii kalla leedahay farqiyo kale duwan oo aan halkaan lagu soo koobi Karin balse anigoo ah Cabduljabaar Sh. Axmed oo ah qoraha koorsadaan waxaan jeclahay inaan gelini doono wakhti badan qaabka ugu fudud oo ay bulshada ku fahmi karaan koorsadaan. Waxaana isku dayi doonaa haddii Alle idmo inaan soo koobi karo nuxurka ugu weyn ee u baahan inay si fiican u fahmaan bulshada qaasatan ardayda dhigato jaamacadaha, ganacsatada, ardayda ka baxday dugsiga sarre, ama cidwalbo oo jecel inay cilmi ku kordhiyaan naftooda.
Si aan u fahano koorsadaan ku saabsan Maamulka Ganacsiga Caalamiga waxaa haboon inaan ku weydiiyo marka horre su’aal ah, Maxay ku kalla duwanyihiin:
Maamulka iyo Maareynta? (ama sidda kale oo aad u taqaano Maamulka Ganacsiga*Business Adminstration or Business Management)
Maamulka Ganacsiga Caalamiga? (International Business Management or International Business Adminstration)
Inta aadan aqrinin qeybta hoose fadlan isku day inaad jawaabta saxda ah bixini karto, waa wax aad u wanaagsan inaad naftaada tijaabiso si aad u ogaato awooda maskaxda kugu xeran heerka ay gaarsiisantahay.
Waan ku sugi lahaa illaa aad jawaab iga siinayso oo waan ku hor fadhini lahaa, balse nasiib daro ma ihi shaqsi ku hor fadhiyo. Si fiican u aqri qeybtaan hoose, maqaalkaan si fiican u dhuux waxaad haysataa fursad qaali ah…..
Waa Maxay Maamulka Iyo Maareynta (Business Adminstration)?
Maamulka iyo maareynta waa nidaam iyo geedi socodka lagu maarayni karo ururada ganacsi ama shirkadaha ganacsiga, haayadaha dawliga ah iyo ururada samafalka. Ardayda kasoo baxay maamulka iyo maareynta waa kuwa u leh aqqoon duruqsan markii ay timaado maamulida shirkada iyo horumarinta fikrada shirkada. Waxayna masuul ay ka noqoni karaan qeybaha sidda, maamulida mashruuca, maamulka xafiiska, iyo maamulaha sarre ee shirkada.
Qeybaha ugu badan uu ka hawlgalo maamulka iyo maareyaha aad ayay u tiro badanyihiin, sidda mashruucyada, dhoofinta, suuqgeynta, dhaqaalaha, maamulka aadanaha, iyo maamulka. Dhammaan qeybahaas oo dhan shirkadaha ganacsi waxay u wada shaqeeyaan si wada jir ah si ganacsiga shirkada ay u noqoto ganacsi guulaysta. Marwalbo ganacsiga ma guulaysani karo illaa la helo wax ku ool ah oo hufan. Maamulayaasha shirkadaha waxay ku xerantahay sidda ay ugu kalla yihiin kuwa wax soo saar leh, haddii ay yihiin hogaamiye wax soo saar leh waxaa inta badan laga dareemaa xariirka ay la leeyihiin shaqalaha shirkada ama ururka. Inta badan shirkadaha waa weyn waxay leeyihiin hal qeyb oo maareynta ah. Qeybtaas ayaa waxwalbo hoos yimadeen. Marwalbo ku shaqeynta deegaanka waxay ku xerantahay qofka gacanta ku haayo nidaaminta ganacsiga shirkada. Qofka ah maamulka iyo mareeyaha ganacsiga waa inuu yahay qof ku wanaagsan xariirinta shaqaalaha shirkada, sawabtoo ah asiga ama iyada waxay la shaqeyni doontaa dad kalla duwan sidda dirida warqadaha iyo teleefoonada.
Maamulka iyo maareynta (Business administration) waxaa loogu soo baxaa jaamacad inta badan ardayga waxaa si fiican loo baraa qeybaha sidda qadamaadka, maaliyada ganacsiga, suuqgeynta, maamulka aadanaha, anshaxa iyo xisabaadka. Ardayga dhiganaayo waxay ku qaadataa illaa 3 sano ama 4 sano waxay ku xerantahay ardayga dadaalkiisa iyo jaamacada sidda ay u bixiso kuliyada.
Waa Maxay Maamulka Ganacsiga Caalamiga? (International Business Management)
Haddii aad xiisayso maaliyada iyo dhaqamada caalamka ka dhigo kuliyada jaamacada Maamulka ganacsiga caalamiga, sawabtoo ah kuliyada maamulka ganacsiga caalamiga, wuxuu salka ku hayaa in ardayga muhiim u tahay inay fahmaan maaliyada iyo dhaqamada kalla duwan (cross cultural management). Ardayga markuu dhiganayo kuliyadaan wuxuu jaamacada ka baranayaa kalla duwanaanshaha maaliyadeed ee suuqyada sarafka iyo lacagaha. Waa inaad si fiican u fahantaa dhaqaalaha caalamka iyo isbedelka suuqyada caalamka. Midda labaad waa inaad tahay shaqsi jecel inuu barto kalla duwanaanshaha bulshada caalamka ku nool.
Ardayga dhiganaayo maamulka ganacsiga caalamiga wuxuu baranayaa waxwalbo oo ku saabsan caalamiga (International) sidda suuqgeynta caalamiga (Global Marketing), qanuunka ganacsiga caalamiga (International business law), iwm. Waxaa kale oo muhiim ah inaad ogtahay qanuunada caalamiga sidda haayada shaqada adduunka (International Labor organization), xariirka ganacsi ee ka dhaxeeyo wadamada (free trade agreements) iwm.
Qeybahaas oo dhan oo aan soo tilmaamay waxaan si fiican ugu sharaxi doonaa cashirada soo socda. Inta ay socoto koorsadaan ah maamulka ganacsiga caalamiga waxaanu barani doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin qaabka aad ganacsigaada ugu dhigi karto ganacsi caalami ah wali asigoo maxali ah.
Qaarada Afrika waxaa ka jirto fursado badan oo ganacsi balse wali lama helin Afrikaankii kafaa’ideysani lahaa dhulkiisa. Waxaana waxyar ka tilmaami doonaa Insha Allah sawabta Soomaaliya ay u tahay wadan ku wanaagsan ganacsi marka loo eego qaarada Afrika iyo caalamkuba. Inaan fahano maamulka ganacsiga caalamiga waa wax aad u wanaagsan inta ay socoto koorsadaana waxaad fahmi doontaa qiimaha y leedahay inaad fahanto dhaqamada kalla duwan si aad u noqoto qof maskax furan oo caalamka wax badan ka fahmay.
Fadlan la soco cashirkii labaad……..
Tags: Cashirkii 1aad: Maamulka Ganacsiga CaalamigaWaa Maxay Maamulka Ganacsiga Caalamiga? |Tukesomalism.com
Next post Waa Maxay Jirada Parkinson Loogu Yeero |TukeSomalism.com
Previous post Faa’iidooyinka Bisha Ramadaan u leedahay Caafimaad keena|Tukesomalism.com